Muay Thai sy toby fanatanjahantena any Thailand ho an'ny traikefa vaovao
Aogositra 22, 2016
4 min novakiana
Ka izao dia nanapa-kevitra ianao fa te hianatra Muay Thai ho an'ny fahasalamanao satria tsapanao fa ny tsy fihetsika dia mety hiteraka ahiahy. Na angamba te hanatsara ny vatanao miaraka amin'izay ianao fa mahia mahia. Tsy maninona reazanaka izay ao an-tsainao amin'ny fiofanana sy ny fampihetseham-batana, tsy misy tsara noho ny fandaniana ny fialantsasatrao mankany Thailandy ary hiditra amin'ny fiofanana Muay Thai any.
Fa maninona Thailand?
Fantatry ny rehetra fa i Thailand no iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana be mpitady indrindra eto amin'izao tontolo izao ankehitriny. Betsaka ny olona manerana an'izao tontolo izao no afaka nandeha teto amin'ity firenena ity isan-taona. Mino izy ireo fa tena zava-dehibe loatra ny fialan-tsasatra. Izany no antony lehibe itiavan'izy ireo zavatra tsy manam-paharoa ary tsy ananan'ny mahazatra.
Inona ny Muay Thai?
Muay Thai dia karazana fanatanjahan-tena, izay novolavolaina nandritra ny taona maro ary nampihatra izany ny mponina eto amin'ity firenena ity mba hiarovan-tena sy hiadiana ihany koa. Amin'izao fotoana izao, ny ankamaroan'ny olona dia mandray anjara amin'ny fampiofanana an'ity fanatanjahantena ity noho ny tombontsoa ara-pahasalamana tsara azony ho an'ny vatany.
Ity fanatanjahantena ity dia endrika fanatanjahan-tena mahery vaika sy mavitrika, izay misy ny fampidirana ny hozatra rehetra ao amin'ny vatana. Isaky ny faran'ny fotoam-pampiofanana dia hahatsapa ho mihatsara sy mavitrika kokoa ny mpianatra na eo aza ny hetsika mavitrika. Ny kilasy fanofanana toy izany dia tena sarotra nefa mahafinaritra izay mampiavaka azy tanteraka amin'ireo kilasim-panatanjahan-tena mahazatra.
Mandehandeha any Thailandy raha salama amin'ny Muay Thai
• Mampiofana, miala sasatra ary mifalifaly - Tsy lazaina intsony izany fa ny tanindrazanao dia tsy manana toerana fizahan-tany mahafinaritra sy toerana fialan-tsasatra, na izany aza, mahagaga hatrany ny mandeha any amin'ny toerana vaovao sy tsara kokoa indraindray. Raha hanam-potoana hitsidihana an'i Thailand ianao dia antenao fa hotsaboina sy homena lanja amin'ny fomba fijery mahafinaritra be ianao, amoron-dranomasina fotsy ary maro hafa! Izany rehetra izany dia hita amin'ny firenena tropikaly iray monja.
• Mifanerasera amina karazan'olona - Raha misafidy ny hampiofana ny Muay Thai any Thailand ianao dia azonao antoka fa hahita olona marobe ianao. Ankoatry ny mpampiofana sparring sy ny mpiara-miasa aminao dia hahatsapa olona amin'ny fari-piainana samihafa ianao. Ny sasany amin'izy ireo dia ireo tompon-tany izay tsy mahazo vola mitovy aminao, na izany aza, izy ireo no olona sariaka indrindra sy sambatra indrindra hitanao amin'ny fiainanao manontolo.
• Mahita zava-baovao - Tsy mampijaly olona mihitsy ny fitsangatsanganana sy ny fitsangatsanganana ary ny fandehanana any Thailand hianatra Muay Thai ao amin'ny www.suwitmuaythai.com dia hevitra tsara. Raha ny marina, aorian'ny fiverenanao dia hahita ny tenanao ianao mieritreritra ireo zavatra nianaranao tao amin'io firenena io ary niresaka izany tamin'ny namanao sy fianakavianao.
Inona no andrasanao? Raha izaho ianao dia handeha ho any Thailandy izao ary hiaina ilay fiainana andavanadro amin'ny fianarana ny Muay Thai, miaraka amin'izay dia hiverina any amin'ny tanindrazako ho olona iray izay tsy nahazo fahaizana miady fotsiny, fa koa olona nahafinaritra be. Sambatra ny dia!
Scuba Diving Holidays Tsy manam-paharoa sy mahaliana
Fanatanjahantena 5 ankafizina indrindra eto amin'izao tontolo izao